Wai Yan Lin » soccer
FA Premier League Champion 2006-2007
continue reading 7.05.2007 |0Comment
Manchester United အသင်းက Everton အသင်းကို ရှုံးနေရာကနေ အသည်းအသန်လိုက်ကစားပြီး ၄ ဂိုး ၂ ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိသွားတဲ့အတွက် ဒုတိယနေရာကလိုက်နေတဲ့ Chelsea အသင်းကို ၅မှတ်ဖြတ်ထားနိုင်လိုက်ပါတယ်။ ပထမပိုင်း ၁၂မိနစ်မှာရတဲ့ဖရီးကစ်ကနေတဆင့် Michael Carrick နဲ့ထိကာလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးဂိုးပေးလိုက်ရပါတယ်။ ပထမပိုင်းပြီးတော့ ၁-၀ နဲ့ မန်ယူရှုံးနေပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းစပြီး ၅မိနစ်လောက်အကြာမှာပဲ တစ်ဂိုးထပ်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် ၂ ဂိုး ၀ နဲ့ရှုံးနိမ့်တော့မယ့်အခြေအနေရောက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် ၁၁မိနစ်အကြာမှာတော့ အဲဗာတန်ဂိုးသမားရဲ့ အမှားကနေတဆင့် O’Shea ကမန်ယူအတွက် ပထမခြေပဂိုးကိုသွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် မန်ယူကတရစပ်ဖိကစားလာတဲ့အတွက် ၆၈မိနစ်မှာ မန်ယူကစားသမားဟောင်း Phil Neville ကိုယ့်ဂိုးကို သွင်းမိတာကြောင့် ခြေပဂိုးရသွားပြီး မန်ယူတို့အားတက်သွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ…
continue reading 28.04.2007 |5Comments
၂၄ ရက်နေ့ညက ကန်သွားတဲ့ မန်ယူနဲ့ အေစီမီလန်တို့ရဲ့ပွဲကို မကြည့်လိုက်ရဘူး။ အရမ်းကိုကြည့်ချင်ခဲ့ပေမယ့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ငဲ့ညှာပြီး ဆေးတွေသောက်ကာ စောစောအိပ်ရာဝင်လိုက်ရပါတယ်။ လူကနေမကောင်းတော့ အားသိပ်မရှိချင်ဘူး။ ကန်မယ့်အချိန်က ည ၂နာရီခွဲလောက်။ နောက်နေ့မနက်မှာ ပရောဂျက်ဆိုတာကြီးကို ဆွေးနွေးစရာရှိတယ်။ အိပ်ရေးပျက်ခံလိုက်ရင် ဆရာဝန်သွားပြရလိမ့်မယ်။ ပိုက်ဆံထွက်မယ်။ နည်းနည်းမဟုတ်ဘူး။ ထိုသို့ ထိုသို့သော အကြောင်းများကြောင့် အကျွန်ုပ်အလွန်တရာ ကြည့်ချင်ပေမယ့် မကြည့်လိုက်ရပါဘူး။ နောက်နေ့မှ သူများတွေပြောပြလို့ သိရပါတယ်။ စိတ်ဖြေတဲ့အနေနဲ့ youtube ကနေပဲ Hightlights လေးတွေကြည့်ရမှာပေါ့လေ။ ၂၅ရက်နေ့က ရှာတာ မတွေ့ဘူး။ ဒီနေ့မှထပ်ရှာလို့ တွေ့သွားတယ်။ မိုက်တယ်ဗျာ။ မကြည့်လိုက်ရတာ ခုမှကိုယ့်ကိုယ်ကို မကျေနပ်ဘူး။ နောက်ပွဲတော့ ရအောင်ကိုကြည့်မယ်။ Technorati:soccer, manutd
continue reading 26.04.2007 |0Comment
Last night (Wed morning in Singapore), Man Utd beat Roma 7-1 in their Champions League Quater Final.It was brilliant performances and really once-in-a-lifetime in European Champions League records. As they left Rome with 2-1 lost last week, fans expected to beat Roma at Old Trafford. And that result really make…
continue reading 11.04.2007 | 1 Comment